Ezona ncwadi zilungileyo zokunika le Krisimesi ka-2022 | Uncwadi lwangoku
Ezona ncwadi zilungileyo zokunika le Krisimesi
Lola ifani | | Iincwadi, Iincwadi, Ezahlukeneyo
Imihla ethile iyasondela kwaye nabo beza neentloko kuthi abo bacinga ngomzuzu wokugqibela ukuba yintoni esiza kuyinika abo sibathandayo. Ukuba awukaluvali uhambo lwakho lokuthenga kwiKrisimesi kwaye uphelelwa ziimbono, mandikuxelele ukuba incwadi ihlala iyinto elungileyo. Kukho iintlobo ezingapheliyo kunye nemixholo, khetha enye enomdla kuloo mntu ukhethekileyo Mothusa ngebali elimnandi.
Kule post Ndizokwabelana nawe ngoluhlu lweencwadi ezingcono onokuzinika le Krisimesi. Ndiyathemba ukuba izindululo zam, ezinemixholo eyahlukeneyo, ziya kukunceda ukukhuthaza ukuba uyeke ukusonga izipho kwaye uqale ukonwabela iintsuku ezimbalwa zokuphumla.
2 Ulwandle ukufikelela kuwe
3 Ukubulawa kukaSocrates
4 Ukufuna Komntu Ngentsingiselo
5 Tatomkhulu othandekayo: phakathi kwam nawe. Ndixelele ibali lobomi bakho
7 Umgca womlilo
8 Ibali lethu lothando olungafezekanga
9 Abafazi bomphefumlo wam
10 Xa ndikhula ndifuna ukuba ... ndonwabe
Ungayithenga le ncwadi apha: Ezingabonakaliyo
Leveli yeveli Sebenzisa u-Moreno lelinye lala mabali akhuthazayo angenamda wobudala. Ukuba ujonga ufundo olunemvakalelo, olwahlukileyo, olunenyani noluchukumisayo, nantsi incwadi oyifunayo.
Ezingabonakaliyo Ibalisa ibali lomntwana, njani kakuhle inokuba libali lakhe nabani na kuthi, kwaye usimema ukuba siphinde sicingisise ngento esiyenzileyo okanye esive ubunzima njengabantu abatsha kwaye kwenzeka ntoni ezikolweni namhlanje. Andifuni ukuhambisa iyelenqe kwi-synopsis yam kuba ibiya kuba umlingo wokuyifumana kancinci kancinci, ngelixa uzibeka ezicathulweni zabalinganiswa. Ewe, ndiza kukuxelela ukuba le noveli, nangona inzima, iya kukuthakatha, iya kukunceda uphilise amanxeba amadala kwaye iya kuba inyembezi (kuwe okanye kumntu omnika yona).
Ulwandle ukufikelela kuwe
Ungayithenga le ncwadi apha: Ulwandle ukufikelela kuwe
Le ncwadi, owokugqibela kumvuzo we-Planeta 2020, Inoveli egcwele uthando, ithenda, isibindi kwaye igcwele iimfihlo zosapho. Ukuba ufuna ukuvusa iimvakalelo kunye neemvakalelo, ungazicingi, uSandra Barneda akabhalwanga ngamabali okubhala achukumisa intliziyo.
Ukongeza, ukungabikho yenye yezona zinto ziphambili zenoveli kunye nothando lwenziwa njengeyeza lokoyisa, ke Ulwandle ukufikelela kuwe Sisipho esifanelekileyo kule mihla. NgeKrisimesi, inkumbulo yabo bathandekayo abangasekhoyo iyavuselelwa kwaye amabali ajongana nezigaba zobomi ezinzima zisinceda ukuba sijongane nelahleko.
Ungayithenga le ncwadi apha: Ukubulawa kukaSocrates
Omnye owokugqibela kwi-Awardeta Award engenakubakho kuluhlu lweencwadi eziphambili zokunika le Krismesi Ukubulawa kukaSocrates, lifakwe nguMarcos Chicot. Inoveli ngu ngokusekwe kwiziganeko kunye nabalinganiswa bokwenyaniNangona umbhali evumela iilayisensi ezithile zokuyila, ngokoluvo lwam, zokutyebisa ibali kunye nokwenza ukuba libe nomtsalane ngakumbi.
Misela kwiGrisi yamandulo, Umsebenzi kaChicot uyakuthutha, ukuntywilisela kwindlela yokuphila yexesha kwaye akusondeze kufutshane nomfanekiso wesinye sezona zithandi zobulumko zoluntu. Ukubulawa kukaSocrates ngokungathandabuzekiyo sisiqhamo somsebenzi obalulekileyo wokugcina amaxwebhu kwaye inokuba njalo isipho esigqibeleleyo seKrisimesi kuye wonke umntu othanda ifilosofi kunye nembali.
Ukufuna Komntu Ngentsingiselo
Ungayithenga le ncwadi apha: Ukufuna Komntu Ngentsingiselo
UViktor Frankl wayengugqirha wezengqondo wase-Austrian kunye nombhali owayevalelwe kwiinkampu zoxinaniso ezahlukeneyo eJamani, kubandakanya iAuschwitz.
Ukufuna Komntu Ngentsingiselo Yiyo Umsebenzi wobomi apho uFrankl engathethi nje ngamava akhe kwezi nkalo, kodwa uqokelela uhlalutyo lwezigaba zengqondo abadlula kuzo amabanjwa, bethetha ngawo indlela awayifumana ngayo intsingiselo yentlungu, ukubandezeleka kunye nobomi. Yincwadi elungileyo ukunika le Krisimesi, ngakumbi ukuba umntu oza kuyifumana ukhetha amabali okwenyani kunentsomi.
Tatomkhulu othandekayo: phakathi kwam nawe. Ndixelele ibali lobomi bakho
Ungayithenga le ncwadi apha: Tatomkhulu othandekayo: phakathi kwam nawe. Ndixelele ibali lobomi bakho
Sele ndikulumkisile kwangaphambili ukuba le ncwadi ayisiyo inoveli onokuyisebenzisa, nangaphezulu kwayo nantoni na kuba amaphepha ayo phantse akananto. Kwiingcinga zam Izipho ezilungileyo zibuyisa iinkumbulo okanye zomelele ngokwaneleyo ukuzenza Ngaba ngekhe kulunge ukwenza isipho esinokubanakho zombini?
Tatomkhulu othandekayo: phakathi kwam nawe. Ndixelele ibali lobomi bakho Yincwadi ebhaliweyo enesiqingatha kwaye inika abadala bethu ithuba lokuba babalise ibali labo. Kunqabile ukuba sihlale nabo simamele ukuba babengoobani xa babebancinci, asiwazi amaphupha abo kwaye mhlawumbi khange sime nokucinga ukuba babenabo okanye basenokuqhubeka bebagcina. Ukuba ufuna ukunika utatomkhulu wakho isipho, ungathandabuzi, le ncwadi iya kuba sisipho sobabini. Oomakhulu nootatomkhulu abahlali ngonaphakade, kodwa amazwi abo anokuhamba nathi ngonaphakade.
Ungayithenga le ncwadi apha: I-Aquitaine
Ngaba loo mntu ukhethekileyo unobuthathaka kwimfihlelo? Ndikubonisa umgqatswa ofanelekileyo wokugcwalisa isikhewu esasimahla phantsi komthi wakho: I-Aquitaine, inoveli kaEva García Sáenz de Urturi.
Este umdla, ilayishwe kakuhle ngamayelenqe kunye nokuziphindezela, ijolise ekubulaweni kukaDuke wase-Aquitaine, ngonyaka we-1137. U-Eleanor uzakuzama ukulungisa iiakhawunti ngento awayecinga ukuba ngumbulali kayise ngokutshata nonyana wakhe, ngaphandle kokwazi ukuba izicwangciso zakhe ziya kuhamba kakubi. I-vendetta yobuqu iyakuphela iba kukukhangela iimpendulo kwaye u-Eleanor uzakuphanda nomyeni wakhe omtsha ukuba yintoni ekhokelele utata wakhe engcwabeni.
Ungayithenga le ncwadi apha: Umgca womlilo
Incwadana yokugqibela yemfazwe nguArturo Pérez Reverte Ngeli xesha usibuyisela kwiMfazwe Yamakhaya yaseSpain ukuze asixelele ngemfazwe yase-Ebro, enye yezona zinegazi kwimbali yaseSpain. Abalinganiswa, amajoni aselula alwa umlo, ayintsomi, kodwa iinyani kunye namabali aphefumlelweyo ngawo ayinyani.
Ngomsebenzi olungileyo wamaxwebhu, Reverte usibhaptiza ebalini kunye nenkohlakalo yemfazwe, enkosi ngepeni yakhe ebalaseleyo kwaye ngokwenyani kwentatheli egubungele ngaphezulu kwembambano enye. Imbali kunye neentsomi ziyahambelana ukwenza lo msebenzi mkhulu Isenokuba sisipho esiyimpumelelo kakhulu kule Krismesi. Ukuba ufuna ukwazi ezinye iincwadi ngombhali, ungaphoswa yile posi kwibhlog yethu.
Ibali lethu lothando olungafezekanga
Ungayithenga le ncwadi apha: Ibali lethu lothando olungafezekanga
Iinoveli zothando zihlala zilayishwa ngeenkolelo, anditsho ukuba oku kuphosakele, ngokufunda sifuna ukubaleka kunye nefantasy yeentyatyambo, iitshokholethi kunye nothando lunokusigcwalisa ngethemba. Nangona kunjalo, kulungile ukufunda ukuxabisa uthando njengoko lunjalo: ukungafezeki.
Kule ncwadi, U-Anna García usoyisa ngebali lokwenene lothando, engafezekanga, ithenda kunye nokubaleka kwiiklasikhi zeklasikhi ezihlala zihlala. Kwiintsapho, ayisiyiyo yonke into ecekeceke kwaye umtshato awuphelelanga ekutyeni iicawa, kukho ubunzima kwaye yiyo loo nto sithandana kancinci.
Ibali lethu lothando olungafezekanga bubungqina bokwenyani kwaye, nangona bungqwabalala, Uyakwazi ukuchukumisa intliziyo yomntu omnike esi sipho. Kukwakho nenxalenye yesibini, Ibali lethu lothando olugqibeleleyo, ukuba ufuna ukumthoba kancinci.
Abafazi bomphefumlo wam
Ungayithenga le ncwadi apha: Abafazi bomphefumlo wam
Abafazi bomphefumlo wam yinoveli yokugqibela ka Isabel Allende. Umbhali waseChile usisondeza kumava akhe kunye nembono yakhe malunga nobufazi ngale ncwadi yobomi equka ukubonakalisa ubuqu.
Kumaphepha ayo uthatha ubomi bakhe bonke kwaye usixelela ngesibophelelo asigcinileyo kunye nentshukumo yabasetyhini ukusukela ebuntwaneni bakhe ukuza kuthi ga ngoku. Khumbula abafazi ababekhe baphawula ubomi bakho, kubabhali nakumanani ababalulekileyo kwihlabathi lobugcisa kwaye onamabali afanelwe ukuthathelwa ingqalelo. Umsebenzi onomdla kunye amandla okudala iingxoxo ezinomdla. Ngokoluvo lwam, enye yezona ncwadi zibalaseleyo zokunika le Krisimesi.
Xa ndikhula ndifuna ukuba ... ndonwabe
Ungayithenga le ncwadi apha: Xa ndikhula ndifuna ukuba ... ndonwabe
Lo Ukudityaniswa kwamabali ngu-Anna Morato García Yiyo Olukhetho olukhulu ukuba ufuna ukuba abantwana abancinci endlwini babambeke kufundo. Ibali lombhali lalikude kuncwadi, wayezinikele kwintengiso nakwimicimbi yeshishini, de waba ngumama. Umnqweno wokufaka kubantwana bakhe uthotho lwexabiso kunye nesimo sengqondo esifanelekileyo ebomini kwamkhokelela ekubeni abhale amabali akhe.
Ibhalwe ngothando olukhulu, amabali aqokelelwe kwi Xa ndikhula ndifuna ukuba ... ndonwabe, thumela amaxabiso kubalulekile njengovelwano, ukuzithemba okanye umbulelo, ukukhonza ukongeza ukonwaba kunye noncedo lokomeleza ukuzithemba kwabantwana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ezona ncwadi zilungileyo zokunika le Krisimesi
Ezona ncwadi zamapolisa zibalaseleyo